Business and Economy | Dr Ko Ko Gyi's Blog
အိုဘားမား၊ အမေစု၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ကချင် ရခိုင်အရေးနှင့် ကျနော့်အတွေး
၁။ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကောင်းပြီးရင်း၊ ကောင်းရန် လိုသော National Figure အမေစု
အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကို သေနတ်ပြ ချိန်းချောက်၍လည်းကောင်း၊ နည်းမျိုးစုံသော မဲလိမ်၊ မဲခိုးနည်းများကို အသုံးပြု၍လည်ကောင်း ရယူလေ့ရှိသည်ကို မြန်မာများ ကောင်းကောင်း သိပါသည်။
ပြည်သူများ၏ ထောက်ခံမှု၊ ဆန့်ကျင်မှုတို့ကို လုံးဝ ဂရုစိုက်လေ့မရှိသော အာဏာရှင်တို့သည် နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားကိုတော့ ကြောက်လေ့ရှိကြပါသည်။
Tags:Asia, Burma, Business, Business and Economy, Diplomacy, Japan, New Zealand, Turkmenistan
Myanmar Authorities ignored the looting of Myanmar Muslims’ home by 300 mob in Kanma, Myanmar
ကံမမြို့ နယ်မှာ လူစုလူဝေးနှင့် ဓါးမြတိုက်မှုဖြစ်ပွါး ဓါးမြတိုက်မှုဖြစ်ပွါးပြီး အပျ…က်အဆီးများကိုတွေ့ ရစဉ် မကွေးတိုင်း ကံမမြို့နယ်တွင် ၁၃.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန်ခန့်တွင် အမည်မသိသူ ဓါးမြ ၃၀၀ ခန့်လောက် သည် ဒေသခံ နေအိမ်များအား အတွင်း အပြင်ရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးကာ ရွေငွေများလုယက် ခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
Tags:Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Business and Economy, David Cameron, Myanmar, Naypyidaw, Thein Sein
Appeal to recently released General Khin Nyunt
Maungmaung Skw wrote on his FB wall: ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် လွတ်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။အထဲမှာ ၆နှစ်လောက်နေခဲ့ ပြီးပြီဆိုတော့-စဉ်းစားတွေးတောချိန် အများကြီး ရခဲ့မှာပါ-သူဟာ တပ်အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်-တပ်ကသူဘက်မှာမရှိဘူး-ပြည်သူ့အတွက်လုပ်ကြည့်ပါလား-ပြည်သူက သူ့ဘက်မှာရှိမှာ အသေအခြာဘဲ-စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့-အချိန်တွေအများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်-အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက် တိုင်းပြည်မှာ နေရာတွေရှိပါတယ်။မိမိဘ၀ နေ၀င်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်-အများအတွက်-ပြည်သူအတွက်-အကျိုးရှိတာတွေ လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။လူတစ်စုအတွက်လုပ်ခဲ့မိလို့-အဲ့ဒီလူတစ်စုကဘဲ-ကျေးဇူးဆပ်တာ ခံယူပြီးပြီဆိုတော့-ပညာရှိတစ်ယောက်ဘဲ-သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။ (more…)
Tags:Asia, Buddhism, Burma, Business and Economy, Khin Nyunt, Lee Kuan Yew, Muslim, Myanmar
Source:MInsider article,”Makanan halal di Beijing” by Uthaya Sankar SB translated by Gogle.
Uthaya, Izan, Jasmine and Fadzillah no problems finding halal food restaurant in Beijing.BEIJING, July 21 –
Muslims who travel to Beijing, China should not worry about thinking of getting guaranteed delicious food and halal.
Tags:Asia, Beijing, Business and Economy, China, Halal, Malaysia, Muslim, Niujie Mosque
Tags:Asia, Asian Highway Network, Business, Business and Economy, Hong Kong, Recreation, Roads and Highways, Vietnam
Source of picture here
My English teacher in the 1st. MBBS Jr and Sr classes at the Medical University in Mandalay.
She wasaDJ of Myanmar Radio, English system.
She isafamous singer, both English and Burmese songs.
She had even acted inaBurmese movie.
She had even visited our house on one Eid. As she had no transport, I had to go and called her with our Jeep.
Actually, Daw Nwe Yin Win was the first person who arouses my interest in Malaysia. After the SEAP Games in Rangoon, she gotaMalaysian badge and she had given me asapresent.
Tags:Asia, Burma, Burmese language, Business and Economy, English asaforeign or second language, Jeep, Mandalay, Myanmar